तीन करोड नेपालिलाइ उर्जा दिने भिडियो ! निरु पुगिन यस्तो ठाउमा हेर्नुहोस(भिडियो) – Tufan Media News
तीन करोड नेपालिलाइ उर्जा दिने भिडियो ! निरु पुगिन यस्तो ठाउमा हेर्नुहोस(भिडियो)
१४ माघ २०७७, बुधबार १२:५६
(भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ)नेपालमा पछिल्लो समयमा गाई पालन व्यवसायिक रुपमा फैलिदै गएको छ । नेपालमा परम्परागत जातका गाईदेखि जर्सिगाईको व्यवसायिक रुपमा पालन सुरु भएको छ ।
योसँगै दूध उत्पादनको क्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ । यहाँ हामीले गाई पालनका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउने जमर्को गरेका छौं । यो जानकारीबाट आधुनिक तथा व्यवसायिक रुपमा गाई पालन गर्न सकिन्छ ।
गाई फार्मका लागि गोठ व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
गोठ बनाउने जमीनको छनौट ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:
ओभानो,पहिरोलो, तुलानत्मक रुपले वरपरभन्दा केही अग्लो र सुरक्षित ठाँउमा ।यातायात, बिजुली,पानी तथा बजारको उपलब्धता भएको स्थानमा ।प्राविधिक सेवा सुविधा, औषधि,दाना आदि उपलब्ध भएको स्थानमा ।घाँस चरन नजिक भएको वा लगाउन सकिने ठाँउमा ।
जंगली जनावर नलाग्ने ठाँउमा ।मलमूत्र खेतबारीमा लान नजिक हुने ठाँउमा ।विभिन्न उमेर र अवस्थाका पशुको लागि छुट्टाछुट्टै लम्बाई, चौडाई भएको बस्ने ठाउँको आवश्यकता पर्छ ।
पशुको किसिमका आधारमा गोठ बनाउनुपर्छ । धेरै साँगुरो ठाँउमा धेरै पशु राखेमा व्यवस्थापनमा कठिनाईका साथै अन्य रोगले पनि आक्रमण गर्न सक्छ । त्यसैले विभिन्न किसिमका पशुको लागि तल लेखिएको वा चित्रमा देखाइए बमोजिमको ठाउँ चाहिन्छ ।